မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: အိပ်မက်မင်းသားလေးနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်လေး...
Posted by mabaydar at 3:31 AM
ဒီလောက်တောင်မှလား. . . .
ဆံပင် . . .
မျက်လုံး . .
သွား . .
အရည်ပြား တစ်ခုချင်းစီ ပေးရင်တော့ ယူမှာ မဟုတ်ဘူးနော်...
အင်း. . .ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ။
သူ ဆံပင်တွေ အတော်ရှည်နေပါလား..သူလဲအရပ်အတော်ရှည်ပါလား.. သိပ်မထင်ရဘူး..
ဗေဗေ ကိုပဲ ဗစ်ဗစ် အံ့သြမိပါတယ် :O ....
ကိုယ်သဘောကျတာလုပ်ရလို့ ပျော်တာလေးတော့ အကျိုးရှိတယ်ပေါ့လေ ..
4/23/2010 10:17 AM
ကိုယ်ထင်တာ လီမင်ဟိုကတောင် ပိုချောသလားလို့...
လူဆိုတာတော့ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ကိုယ်ပါပဲလေ... ချောတာတော့ ၂ယောက်လုံးချောတာပဲ.. ခုဟာက ဆံပင်ပုံကြောင့် ဖြစ်နေတာ... ရုပ်ရည်ထက် သူ့အနုပညာ သရုပ်ဆောင်အားနဲ့ ပရိတ်သတ်အပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ထားကို သဘောကျမိတာပါ... ပြီးတော့ အဲလို international Star တွေကို သွားတွေ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို လိုချင်လို့လဲသွားတာပါ...
Sometimes Nice to be crazy for something or someone.
yeah... that's what I am doing it exactly... If not, life is boring and not exciting. We should seek for what we enjoy doing.
အို.. ဆံပင်တွေ ရှည်လို့ပါလား...
ကိုယ်သာဆိုရင်လည်း အဲလို အော်မိ ငိုမိမှာပဲ.. ည၁၀ နာရီလောက်က ခုလောက်ဆို သူရောက်နေလောက်ပြီလို့တောင် ပြောမိသေးတယ်။ ဒီညနေလည်း ရုံးမှာ ထိုင်နေရင်း IMM ကို စိတ်ရောက်နေဦးမယ်း(
အတွေ့အကြုံတွေ ဆက်ရေးနေဦးနော်.. မျှော်နေတယ်း)))